ကျွန်တော် အိပ်ယာက နိုးထလာတော.နွေဦးပေါက် နေရောင်ခြည်များက အခန်းထဲမှာ လေးတွဲ့စွာ ဝဲပျံကြလို့ နေသည် ။ မက်လက်စ အိပ်မက် ကို အသာအယာ ခေါက်သိမ်းလိုက်တော့ အိပ်မက် က ဆက်မမက် တော.ဘူးလား ဟု ကြာဟန်ပါပါ မေးသေးသည် ၊ ကျွန်တော်က အိပ်မက် အဟောင်းတွေ ဈေးကောင်း မရတော.ဘူးဟု ပြောကာ အခန်းအပြင် ဘက်သို. ထွက်လာခဲ.လိုက်သည် ။
အပြင်ဘက်က ပန်းခြံ ထဲမှာ သဘာဝရဲ့ ပန်းပွင့်ငယ် များ ဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်များ က ပေါ့ပါး လွတ်လပ် စွာ သဘာဝ ဆန်ဆန် ပြေးလွှားဆော့ ကစားနေကြသည် ။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို.ဧရာဝတီရဲ့ ရင်သွေးငယ်လေး တွေ ရော ဘယ်နားရောက်နေခဲ.လဲ ကျွန်တော် ဆက် မတွေးချင်တော့ ၊ ပြင်ပ ကမ္ဘာကြီးထဲ မှာတော. ကောင်းကင် ကြီးက ပြာလွင်တောက် ပ လို့ သက်တန့် ရောင်စုံများနှင့် မနာလိုစရာ ကောင်းလောက် အောင် လှပလွန်းနေသည် ...။ တိမ်ပြာပြာ ဆန်းဒေးပေါ့ ... ကျွန်တော်တို. သိပ်ချစ်တဲ့ အမိမြေရဲ့ ကောင်းကင်ကြီး ကတော့ တိမ်ညို ၊ တိမ်မဲ များ မကင်းစင်နိုင်သေး ...။
တကယ်တမ်း ကြတော့ ဘဝ ဟာ ကစားပွဲ တစ်ခုထက် ကို ပိုမိုလွန်း နေခဲ.သည့်.... ။ ဘာပြီးရင် ဘာလာမလဲ
တိတိကျကျ ခန့်မှန်းလို့ မရ၊ ကံကြမ္မာက ထိုးနှက်သည့် လက်သီးချက် များက အတားအဆီး မဲ့စွာ ကျွန်တော် မျက်နာ ပေါ်မှာ ..တစ်လုံး ပြီး တစ်လုံး.... တန်ပြန် တိုက်ခိုက်ဖို့ စိတ်ကူးခွင့် မရ နိုင်ခဲ့ လောက်အောင် ပင် တရစပ် မြန်ဆန်လွန်းလှသည်......။
အခုတစ်လော ၊လောဘဗေဒ ပါရဂူများ ထုတ်ပြန်သည့် အရောင်းသွက် ၁၀ မျိုးစာရင်းတွင် အဆင်သင့် သောက် သုံးနိုင်သည့် လွင်.မျော မိုးတိမ် တံဆိပ် မိုးခါးရေများ ထိပ်ဆုံးက ပါလာသည်...။ ဝိရောဓိ ဟု အမည်ပေးထား သော မျက်ရည် သန်.စက်များမှာ မူ ပုံမှန် အဝယ်လိုက်နေမြဲပင် ဖြစ်သည်။ နာဂစ် မုန်တိုင်း အပြီး တစ်ချို့သော မျက်ရည် များမှာ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု မရှိတော့ သဖြင့် လူသာမန် များ ခံစားရန် မသင်တော်ကြောင်း ကမ္ဘာ.နှ လုံးသား အဖွဲချုပ် ကြီးက ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့လေသည်....။
ကျွန်တော်ကတော့ အရိုသားဆုံး ခင်းကျင်းပြလိုက်တာပါ ... ။ "မာရာဒိုနာ"...ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို သဘောကျ တယ်ဗျာ..ဒါပေမဲ.ခင်ဗျားက ကျွန်တော်ရဲ့ သူရဲကောင်းမဟုတ်ခဲဘူး ..... "ရှာရာပိုဗာ" ကို ကျွန်တော် သဘော ကျခဲ့ သလိုမျိုး ခင်ဗျားကို သဘောကျတယ်...ကျွန်တော့် ရဲ့သူရဲကောင်းတွေ ဟာ "မာသာထရီစာ" "ဦးဝင်းတင်" “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” နှင်. သူတို.ရဲ. လိုအင် ဆန္ဒ တွေကို ရှေ့တန်းမတင်ပဲ အမြဲတမ်း ပေးဆပ်ခဲ့တဲ လူတွေ ဟာ ကျွန်တော့်ရင် ထဲမှာ နေရာအပြည်.ယူလို့.............။
လူငယ် တစ်ယောက် ရဲ့ ယုံကြည် မူ မိုးကောင်းကင် ကရော ဘယ်ဆီလွင့် ပါးခဲ.ပြီလဲ ........ဂစ်တာ တစ်လုံး နဲ့ ရော.ခ် သီချင်း ကြိုက် တတ်သူ..ဆင်ခြေဖုံး မြို့လေးရဲ့ တီးရှော. အဟောင်းလေး ထဲမှာ ထိုင်ပြီး တောင်စဉ်ရေမရ အတွေးတွေ ကို ကဗျာ တွေ ချချ ရေးတတ် တဲ့ သူ......သောက အခိုးအငွေ.တွေကို ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ထဲ ထည့် ပြီး မီးခိုးငွေတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲ တတ်ခဲ့သူ လေ....သူကောင်း ကင်ထဲ က တိမ်တိုက် တွေက ကြီးကြီးမားမား သိပ်မရှိရှာဘူး....ချစ်ခြင်းတရား ၊ အနုပညာ နဲ့ မန်ချက်စတာ ဘောလုံး အသင်း ကို ထုထည်ဖွဲ့ ခုံမင်တတ်ခဲ့ သူ..... ပြန်မရ နိုင်တော့ ဘူးကွယ် ...ဒီညတွေကို ...ဒီဘဝမှာ ပြန်မရတော.ဘူး..............။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်တွေ မိုးခေါင် နေခဲ့သည် မှာ ကာလ အတန်ကြာနေခဲ့လေပြီ......ကျွန်တော် တို့ အသွေး ၊ အသား ထဲက ဆာလောင် တက်မက်နေတဲ့......လွတ်လပ်ခြင်း လွင်ပြင်ကျယ် ဆီကို....ပျံသန်းရောက်ရှိဖို့.....အတောင်ပံတွေကို မီးကုန်၊ယမ်းကုန် ဆန့်တန်း ခတ်ထုတ်ရအုန်းမည်........လမ်းခုလတ် နားခိုရာ နေရာကောင်း မှာ မှီတွယ် ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေ လည်း ကျန်ခဲ.ကြလေပြီ.....တစ်ချို့ ကတော့ သက်လုံ မကောင်းချင်တော့........ရှိပလေစေတော့.....အမြင်.ပျံငှက် တို့ရဲ့ မိုင်ထောင်ချီ ခရီး အချည်းအနှီး တော့ မဖြစ်စေရ....။
ကျွန်တော် က တော့ ဒီလွင်ပြင်ကျယ် ရိုးတစ်လျှောက် မှာ ထိုးဖောက် ပျံသန်း နေရအုနုးမှာပါ ....တတ်နိုင်ရင် မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းနား ရောက် တဲ့ အထိပေါ့.....။
အော်...အခုများတော့လဲ ရွှေသား အသက်ဓါတ်လေး လို တယုတယ တန်ဘိုးထား မြတ်နိုးရတဲ့ ကဗျာ မှော်ဝတ်ရုံ လေးခြုံလို့ လောကဓါတ် မြေတစ်ခွင် မှာ နေတတ်၊ သေတတ် ခဲ့လေပြီ......။
Posted by phone myint at 10:32 PM
အရေး အသား ကတော့ အရမ်းကောင်းပဲ ညီရေ ချီးကျူးပါတယ် ဒါကြောင့်လဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သေလောက်သည့် ကိစ္စမှအပ မခေါ်ရ ဆိုပြီး ပိုစ့်ကို ရှယ်ရေး နေတာ ထင်ပါ့ ကောင်းတယ်ကွာ အရေးအသားတွေမိုက်တယ်ကွ ဆက်ကြိုးစားပါ ညီရေ အားပေးနေပါတယ်..။
ဂျိမ်း ဂျွိုက် (စ်) (၁၈၈၂-၁၉၄၁) - James Joyce (18...